4 Siyaabaha la isu caawino in aad takhaluso soo noq iCloud Calaamad-In Codsiga
1.Re-galaan Password sida ay codsi
2.Log Out ​​oo gasho iCloud
3.Check Cinwaanka Email u iCloud iyo Apple aqoonsiga
4.Change System rabtid & Dib u celi Accounts
Waxaad waxay Author warka ku saabsan qalabka macruufka markii si lama filaan ah, daaqad booda ka mid ah buluug codsanaya inaad gasho sirta iCloud. Waxaad illobidda ee sirta ah, laakiin uu furmo suuqa hayaa dhisayaa ilaa daqiiqad kasta. Iyadoo la keeneen in doonaa inaad muhiim ah in sirta iCloud marka aad saxiixa shubo xisaabta iCloud (Password aan la badbaadiyey ama soo xusuustay sida aad xisaab kale) iyo marka aad kor u qalab aad taageerto, tani waxay noqon kartaa wax aad looga xumaado oo dhiba.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah dadka isticmaala Apple in soo noqnoqotay arrintani, si aad keligaa ma tihid. Dhibaatada ugu badan tahay in ay keento update nidaam sida aad updated aad firmware ka iOS6 in iOS8. Haddii aad ku xiran yihiin ee network WiFi ah, macquul kale Waayo, kuwaas oo Dardar password joogto ah waxaa keeni kara Dicumintiyo farsamo ee nidaamka.
4 Solutions Common in dayactir Qoraalka cadadkiisu yahay
iCloud waa adeeg dhammaystira muhiim u tahay aaladaha Apple iyo sida caadiga ah, user macruufka ah ayuu dooran doonaa adeegyada daruur Apple sidii ay doorasho kaydinta hore iyo gadaal ilaa xogta ay. Arrimaha la iCloud noqon kartaa qarow ah aan loo baahnayn in qaar ka mid ah, laakiin waa in dadka isticmaala dhaaran u badan. Tani waxay arin u noqdaan log iCloud in dardar la xallin karin ka dib markii ay fursado yar oo sahlan sida hoos ku qoran.
Qeybta 1 Dib-u-galaan Password sida Codsaday
Habka ugu fudud yahay in dib loo geli sirta iCloud. Si kastaba ha ahaatee, straightforwardly u galay suuqa kala pop up ma aha xalka. Waxaad lahaa inay sameeyaan waxyaabaha soo socda:
Talaabada 1: gala Settings
Aad macruufka qalab ee "xaaladdda" menu oo guji "iCloud".
Talaabada 2: qortaa erayga sirta ah
Next, sii wadi lahaa dib-u-galaya cinwaanka email iyo password aad si looga fogaado dhibaato ka soo noqnoqda mar kale.
Part 2 Log Out ​​oo gasho iCloud
Mararka, ikhtiyaarka ugu horeysay sida dib-u-galaya faahfaahin login aad xallin doonaa arrinta diiqayo. Halkii, gashid ka mid ah iCloud iyo gashid mar kale laga yaabaa in ay tahay doorasho fiican aad u. Si aad isku dayi habkan, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa qabtaan tallaabooyinka soo socda:
Talaabada 1: Saxiix ka mid ah iCloud
On qalab macruufka, aad hab ay "Settings" menu. Raadi ee "iCloud" link oo guji "Saxiix Out" badhanka.
Talaabada 2: reboot qalab macruufka
Habka reboot waxaa sidoo kale loo yaqaan keddibna adag. Waxaad ku samayn kartaa adiga oo riixaya ah "Home" iyo badhamada "Hurdo / Wake" isku mar ilaa aad ugu danbeyn arki logo Apple waxay u muuqdaan shaashada.
Talaabada 3: Saxiix dib iCloud
Ugu dambeyntii, mar qalab aad ayaa ku soo bilowday iyo gebi ahaanba kabaha, waxaad karaa mar kale dib u soo gelida ID Apple iyo password si aad u saxiixdo iCloud. Waa in aadan qaadan su'aalo dhibsado mar kale ka dib markii habkan.
Part 3 Hubi Cinwaanka Email u iCloud iyo ID Apple ah
Sabab kale oo suurto gal ah in iCloud hayaa on taasoo keentay in aad dib u soo gelida sirta ah waa in aad laga yaabaa illobidda xaaladaha kala duwan ee ID Apple aad inta aad login iCloud. Tusaale ahaan, ID Apple oo dhan waxaa laga yaabaa in ee alifbeetada waawayn, laakiin waxaad iyaga illobidda in xarfaha marka aad isku dayayeen in ay gasho xisaabtaada iCloud saldhigyada telefoonka.
Jaanqaadayn ayaa si fudud loo xallin karin sameeyo mid ka mid ah laba fursadaha hoos ku qoran:
Xulashada 1: bedesho cinwaankaaga iCloud aad
Browse ilaa aad macruufka qalab ee "Settings" oo xulo "iCloud". Markaas, kaliya dib-galaan ID Apple iyo password aad sida.
Xulashada 2: beddel ID Apple aad
La mid ah in ay fursad u horeysay, falgali qaybta "Settings" ee qalabka macruufka iyo u cusbooneysiiso cinwaanka emailkaaga hoos "Lugood & App Store" faahfaahin login.
Qeybta 4 aad rabtid Change System & Accounts Warbixannada
Haddii aad weli aanay kaa kaxeyn karo arrinta, waxa ugu suurto gal in aadan xisaabtaada iCloud si sax ah reserved yahay. Sida habboon, technology ka dhigaysa nolosheena Nacaabuda lacag la'aan ah, laakiin waxa ay mararka qaar na waxay keeni kartaa dhibaato qaar ka mid ah. Waxaa suuragal ah in aad iCloud iyo xisaab kale in aan si fiican u hagaagsan oo heli naftooda dhexyaacaayaan.
Waxaad isku dayi kartaa in ay nadiifiso xisaabaadka iyo iyaga howleheedii sida hoos ku qoran:
Talaabada 1: Tag "Xulasho System" ee iCloud iyo Clear All muqleeyaha
Si aad u damiyo iCloud ee nidaamka doorashada, u tag Settings> iCloud> Xulasho System in delink xisaab kale oo syncs la xisaabtaada iCloud. Waxaa xusid mudan in booqashada app waluba wuxuu hoos Apple in uu leeyahay in syncing doorasho la iCloud si loo hubiyo in dhammaan waa la saxiixay ka mid ah iCloud.
Talaabada 2: Mar kale Sax dhamaan sanduuqyada ku
Marka dhan laga daadiyo waa naafo ka syncing la iCloud, dib "Xulasho System" galeen tago oo sax wax walba dib mar kale. Tani waxay awood u lahaayeen barnaamijyadooda mar kale si hagaagsan la iCloud ah. Haddii arrinta aan la xalin, isku day in aad mar kale ku soo celiyaan tallaabooyinka kor ku xusan ka dib markii aad u billaabeen qalab macruufka.
> Resource > iCloud > 4 Siyaabaha la isu caawino in aad takhaluso soo noq iCloud Saxiixa-Codsiga